Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ kacha ọhụrụ na Indonesia » Ị hụrụ nri Bali n'anya? Nabata na Bali
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • culinary • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ kacha ọhụrụ na Indonesia • News • ndị mmadụ • Tourism • Transportation • trending Ugbu a
Bali dị njikere maka njem nlegharị anya mba ụwa mgbe ndị ọchịchị nyere ọkụ ọkụ.
Bali dịkwa njikere ma gosipụta ya na ngwa ọhụrụ akpọrọ Welcome Back to Bali. Ngwa a ga -enye ndị ọbịa ezigbo ozi gbasara ihe ga -ekwe omume, yana ihe ekwesịrị izere mgbe ị na -aga Agwaetiti Chukwu.
Agwaetiti nke Chi dị na -akwado imeghe ndị ọbịa, mana oge a ka edobeghi.
The Alilọ nkwari akụ Bali taa kpọrọ oku ka ọ bịa nzukọ mkparịta ụka mebere na nkwari akụ Grand Hyatt na Nusa Dua.
Kedu ka ọ ga-esi dị iche na Bali, nzọụkwụ mbụ bụ ị incredibleụ mmiri dị ịtụnanya Ememme Nri Sustainable Bali.
Ndị otu ụlọ oriri na ọaliụ Bụ Bali taa wepụtara ngwa "Welcome Back to Bali" dị ka ngwa ọrụ maka njem nlegharị anya n'agwaetiti Indonesian a, nke a makwaara dị ka Agwaetiti Paradaịs.
Site na ugwu ndị dị ebube ruo n'ụsọ oké osimiri ruo ugwu ugwu mgbawa ruo n'ikpere mmiri nwere aja ojii, ọ bụghị ihe ijuanya na a maara Bali dị ka agwa nke Chi.
N'agbata agwaetiti Java na Lombok, Bali nwere ọdịbendị bara ụba na nke dị iche iche nke mara mma.
"Bali bụ ndụ m" - Nke a bụ nkwupụta siri ike nke na -egosipụta eziokwu ahụ bụ na Bali abụghị ebe njem ọ bụla kama ọ bụ agwaetiti mara mma nke ndị Balin nwere ma bie na -anabata ndị ọbịa ka ha nwee ọ enjoyụ n'àgwàetiti ahụ. Dị ka nkwupụta ọ bụ mmetụta uche, eziokwu, na eziokwu, ọ na -akpọ ụwa oku ka ha chọpụta ihe kpatara Bali ji pụọ iche.
COVID-19 etiela Bali ihe ike na mechie ụlọ ọrụ njem na njem nlegharị anya dị mkpa.
Otu izu gara aga Indonesia emeela ka mgbochi COVID-19 kwụsịtụrụ n'agwaetiti Bali a ma ama na-eme njem, ọ bụ ezie na ndị njem mba ụwa ga-eche usoro iwu siri ike mbata iji nyere aka kwụsị mgbasa nke ụdị ọhụrụ, onye isi ala kwuru na Mọnde.
Ebe ndị njem nlegharị anya n'ọtụtụ akụkụ agwaetiti ahụ ga-anabata ndị ọbịa ugbu a, minista mmiri na onye na-ahụ maka itinye ego Luhut Panjaitan gwara ogbako mebere, ọ bụrụhaala na ha na-agbaso usoro iwu siri ike, dị ka igosipụta ọnọdụ ịgba ọgwụ mgbochi ha na ngwa ekwentị ekwenyela nke gọọmentị.
Ka ọ dị ugbu a, Bali ka bụ ebe ahịa maka ahịa ụlọ, ebe ọ bụ na ọdụ ụgbọ elu Den Pasar emepebeghị maka ọbịbịa ndị ọbịa mba ofesi.
Dabere na otu onye isi otu Association Hotel, ndị otu njem na njem nlegharị anya na Bali ka nwere nchekwube ma nwee olile anya na mkpali ịmalitegharị njem mba ofesi ọzọ n'oge adịghị anya.
Ngwa Nnabata Nnabata ewebata taa bụ isi mmalite ozi ntụkwasị obi maka ndị na-eme ezumike ịhazi na ịgagharị njem na Bali n'enweghị nsogbu ọ bụla.
Ebumnuche ya bụ inye ndị ọbịa niile na ndị njem njem ozi kachasị ọhụrụ na nke ziri ezi gbasara ọnọdụ na -agbanwe agbanwe na Bali.
Ozi sitere na ndị ọrụ gọọmentị, isi mmalite enwetara ma dabara na ọnọdụ Bali ugbu a.
Ozi dị Nabata na ịlaghachi na Bali, bụ inyere ndị njem na Bali aka ime mkpebi nke ọma gbasara ịga Bali na ịnọrọ na Bali. Nke a gụnyere ozi na ndụmọdụ gọọmentị-kpọmkwem njem njem yana ndụmọdụ izugbe gbasara ọnọdụ dị ugbu a gbasara mmachi njem ikuku na usoro dị na Bali.
Ndị njem niile kwesịrị iburu ibu ọrụ maka mkpebi njem ha gụnyere nghọta nke ozi ahụ Nabata na ịlaghachi na Bali ebughị n'obi ịbụ, ma ọ bụ ka a ga -atụkwasị ya obi, dị ka onye nnọchi maka ndụmọdụ gbasara iwu ma ọ bụ ndụmọdụ ndị ọzọ. Ndị ọrụ kwesịrị ịnweta ndụmọdụ ọkachamara ọ bụla dabara adaba maka ọnọdụ ha.
Bali Hotels Association na -akwado ma na -elekọta saịtị ahụ.
eTurboNews gara ogbako ndị nta akụkọ taa.
Mgbakọ ọgbakọ ndị otu ụlọ oriri na nkwari akụ Bali.